I-Oral Turinabol (Oral Tbol) powder (2446-23-3) ≥98% | I-powder ye-AASraw
/ Imikhiqizo / Anabolics Steroids / I-Testosterone powder Series / I-Oral Turinabol (Oral Tbol) powder
SKU: 2446-23-3. Categories: I-Testosterone powder Series, Anabolics Steroids
I-AASraw ikwazi ukuhlanganisa nokukhiqiza ikhono kusuka kugramu ukuya ku-oda omude we-Oral Turinabol (Oral Tbol) powder (2446-23-3), ngaphansi komthethonqubo we-CGMP kanye nesistimu yokulawula ikhwalithi elandelwayo.
Ividiyo ye-Oral Turinabol (Oral Tbol) ye-powder
I-Oral Turinabol (Oral Tbol) powder Izinhlamvu eziyisisekelo
Formula Yamamolekhula: C22H50
Isisindo somzimba: 314.63200
I-Melt Point: 125 - 127 ° C
Umbala: Off powder omhlophe
I-Oral Turinabol (Oral Tbol) ukusetshenziswa kwephini emjikelezweni we-steroids
I-Oral Turinabol powder nayo ibizwa ngokuthi i-Oral Tbol powder (i-CAS 2446-23-3), i-OT njll.
I-Oral Tbol powder (Oral Turinabol powder) Ukusetshenziswa
I-turinabol yomlomo isetshenziswa ngokujwayelekile ngomlomo. Kwesilisa, ngokuvamile i-15mg-40mg ngosuku, angaphezu kwamaviki angu-8; Kwabesifazane, ngokuvamile i-2.5-5mg ngosuku, angaphezu kwamaviki angu-6.
I-ORAL T-BOL isungulwe ngemuva kwe-danabol. Ukukhuluma ngomlomo kuvumela ukuthuthukiswa okukhulu ngaphandle kokubangela ukugcinwa kwamanzi njenge-danabol. Isenzo saso sihamba kancane kodwa izinzuzo zizinzile. Ukulungiselela lokhu ku-anabolic kuyingqayizivele yokwenza ukukhiqizwa kwemvelo kwe-testosterone, ukuthi umsebenzisi ekupheleni kokwelashwa unesilinganiso esiphezulu senhlama yemvelo. Kuhle ukuqhubeka nokuthuthukisa imisipha yakhe esikhathini eside.
I-chlorodehydromethyltestosterone, igama elijwayelekile lomculo owaziwa kakhulu o-Oral Turinabol, yi-derivative enamandla ka-Dianabol. Le steroid yomlomo isakhiwo esiphambanweni phakathi kwe-methandrostenolone ne-clostebol (i-4-chlorotestosterone), enezakhiwo ezifanayo njenge-Dianabol ne-4-chloro ukuguqulwa kwe-clostebol. Lokhu kuguqulwa kwenza i-chlorodehydromethyltestosterone umzala omdala we-Dianabol, i-steroid entsha engabonakali neze-estrogenic nomsebenzi ongencane kakhulu we-androgenic uma kuqhathaniswa nomlingani wakhe odumile kakhulu. Umsebenzi we-anabolic we-chlorodehydromethyltestosterone uhle kakhulu kunalowo u-Dianabol futhi, kodwa ugcina ibhalansi ye-anabolic enhle kakhulu emthonjeni we-androgenic. Lokhu kusho ukuthi kunoma yikuphi izinga elinikeziwe lomsebenzi wokwakha imisipha, i-chlorodehydromethyltestosterone ngeke ibe nemiphumela encane yokukhiqiza imiphumela emibi ye-androgenic.
Umthamo ovamile womtholampilo we-Oral Turinabol kulinganiselwa ukuthi u-5 mg ngosuku; iziqondiso ezikhona zangempela azikho. Esigabeni sezemidlalo, umthamo wansuku zonke osebenza ngomlomo uwela ohlangothini lwe-15-40 mg, ethathwe emjikelezweni engapheli ngaphezu kwamasonto e-6-8 ukunciphisa ukushisa kwesifo. Leli zanele lanele ukunyuka okulinganisako emasimini amandla aqinile namandla. Leli agent livame ukusetshenziselwa njenge-pre-contest or cutting steroid ngezinhloso zokwakha umzimba, futhi ayibhekwa njengelungu elihle lokubamba iqhaza ngenxa yokuntuleka kwe-estrogenicity. Abagijimi emidlalweni lapho isivinini sivame ukugxila khona futhi sithole umusa oqinile ku-chlorodehydromethyltestosterone, ukuthola inzuzo enamandla ye-anabolic ngaphandle kokuba sithwale noma iyiphi enye amanzi noma isisindo somzimba.
Ukusetshenziswa Kwabesilisa Abesifazane
Isilinganiso esivamile somtholampilo se-Oral Turinabol kulinganiselwa ukuthi sibe yi-1-2.5 mg ngosuku; iziqondiso ezikhona zangempela azikho. Esigabeni sezemidlalo, abesifazane babevame ukuthatha i-tablet eyodwa ye-5 mg ngosuku, bathathwa ngemijikelezo engeke ibe ngaphezu kwamaviki angu-4-6 ukunciphisa ukushisa kwesifo. Imiphumela emibi kakhulu ayinakwenzeka kulezinga lokusebenzisa. Izindleko eziphakeme kakhulu zazivame ukusetshenziselwa abagijimi besifazane ohlelweni lwangaphambili lwe-GDR doping, kodwa ngokuvamile lulimaza imiphumela emibi emibi kakhulu.
I-half-life ezincwadini zesayensi emva kokuphathwa kwe-IV ngamahora angu-16; Kodwa-ke, isigamu sempilo yomlomo akuyona into efanayo ye -1. Ngokuvamile isigamu sempilo sokuphatha ngomlomo singaphezu kukaleyo ye-IV yokuphatha, kodwa, kulokhu kungase kube mfushane ngenxa yokudlula kokuqala kwesimetri kanye nokunciphisa izinga eliphakeme le-plasma uma kuqhathaniswa ne-IV dose1. Enye iphepha liphakamisa ingxenye encane yokuphila2. Ukulinganisela okuhle okungenani amahora ayisishiyagalombili wokuphila kwengxenye yalesi steroid ngenani elibonakalayo phakathi kwama-12 namahora angu-20. Iqiniso lokuthi ama-metabolites ale steroid angatholakala isikhathi eside ngemuva kokuthi ukuyeka kudlulisela isigamu sempilo eside eside3.
Abasebenzisi baye babika ukucindezelwa okunamandla kwamazinga e-testosterone wemvelo ngenkathi usebenzisa i-Oral Turinabol. Le steroid isibindi sinobuthi kodwa cishe isifo esinobuthi kakhulu kunamanani alinganayo we-methandrostenolone. Le steroid yaziwa kakhulu ngendima yayo ohlelweni lwe-doping oluxhaswe nguhulumeni lwakwa-formerly German East Olympic doping program. Lesi sidakamizwa sanikezwa abagijimi besilisa nabesifazane ngokukhethekile ukwandisa ukusebenza kwezemidlalo kuma-Olympic. Nakuba amadoda aphathwa, abesifazane babegxila kakhulu ngoba baphendule kangcono kakhulu ukwelashwa. Amanani we-10 kuphela ku-20 mg ngosuku akhiqiza ukwanda okuphawulekayo ekusebenzeni kwabesifazane. Lolu hlelo lwaluhlanganisa nezinye izidakamizwa ezifana ne-mestanolone, ifomu le-11-beta hydroxy ye-Oral Turinabol, i-4-chloro-methyltestosterone, i-4-chloro-mestanolone, i-methandrostenolone, i-testosterone ne-nandrolone esters kanye nezinye izinto ezikhuthazayo nama-hormone e-peptide. Noma kunjalo, i-Oral Turinabol yayigxile ngoba kubonakala sengathi ibika imiphumela engcono4.
I-Oral Turinabol iboniswe eminyakeni yamuva emakethe yasemuva nabantu abasebenzisa okungaphezu kuka-100 mg ngosuku. Kulesi sifo, umuntu kufanele azibuze ukuthi umkhiqizo uqukethe i-steroid efanele noma ungaphansi kwesigqila noma uma kungenye nje "kokunye okungcono".
Isexwayiso ku-Tbol yomlomo ogqamile (CAS 2446-23-3)
Imiphumela emibi ye-Oral Turinabol ingenye ye-mildest ye-steroid ye-anabolic emhlabeni. Kodwa-ke, sizophinde sithole ukuthi kungaba nomthelela oqinile, omubi emzimbeni we-cardiovascular. Lokhu kufanele kube nokulawulwa komuntu omdala onempilo kodwa kuyoba into oyidingayo ukugcina iso. Bobabili amadoda nabesifazane bazokwazi ukusebenzisa le steroid.
Imiphumela Yecala (Androgenic)
Nakuba i-chlorodehydromethyltestosterone ihlukaniswa njenge-anabolic steroid, imiphumela emibi ye-androgenic nayo isenzeka ngalesi sici. Lezi zingabandakanya izikhumba zesikhumba samafutha, ama-acne, nokukhula kwezinwele zomzimba / ubuso. Amanani aphezulu kunejwayelekile avamile angase abangele imiphumela enjalo. I-anabolic / androgenic steroids ingase ikhulise nokulahlekelwa izinwele zesilisa. Abesifazane baxwayiswa ngokungeziwe ngemiphumela emihle engaba khona ye-anabolic / androgenic steroids. Lezi zingabandakanya ukujula kwezwi, ukungahambisani nokuya esikhathini, ukuguqulwa kwesikhumba ukuthungwa, ukukhula kwezinwele ebusweni, nokukhuliswa kwesibindi. I-chlorodehydromethyltestosterone ayixilwanga kakhulu nge-5-alpha reductase enzyme, ngakho-ke i-androgenicity yayo ehlobene nayo ayishintshi kakhulu ukusetshenziswa okufanayo kwe-finasteride noma i-dutasteride
Imiphumela Yecala (I-Hepatotoxicity)
I-chlorodehydromethyltestosterone iyinhlanganisela ye-c17-alpha alkylated. Lokhu kuguqulwa kuvikela lesi sidakamizwa ekusebenziseni ukuvinjelwa kwesibindi, okuvumela amaphesenti aphezulu kakhulu ukungena kwezidakamizwa egazini elandela ukuphathwa komlomo. I-C17-alpha alkylated i-anabolic / i-androgenic steroids ingaba yi-hepatotoxic. Ukwehliswa isikhathi eside noma okuphakeme kungabangela ukulimala kwesibindi. Ezimweni ezingavamile ukukhubazeka okusongela impilo kungase kuthuthuke. Kunconywa ukuvakashela udokotela ngezikhathi ezithile emjikelezweni ngamunye ukuqapha ukusebenza kwesibindi kanye nempilo yonke. Ukungena kwe-c17-alpha alkylated steroids kuvame ukulinganiselwa kumaviki angu-6-8, ngomzamo wokugwema ukukhula kwesibindi. Ukusetshenziswa kokuxoshwa kwesibindi njenge-Liver Stabil, i-Liv-52, noma i-Essentiale Forte kunconywa ngenkathi kuthatha noma iyiphi i-hepatotoxic anabolic / androgenic steroids.
Imiphumela emibi (Inhliziyo)
I-anabolic / i-androgenic steroids ingaba nomthelela omubi kwi-serum cholesterol. Lokhu kuhlanganisa ukuthambekela kokunciphisa ama-cholesterol ama-HDL (okuhle) nokwandisa amanani we-cholesterol e-LDL (amabi), angashintsha i-HDL ku-Balance LDL ngendlela ebonisa ingozi enkulu ye-arteriosclerosis. Umthelela onobuhle we-anabolic / i-androgenic steroid kwi-serum lipids incike emtheni, indlela yokuphatha (ngomlomo vs. injectable), uhlobo lwe-steroid (okunenzuzo noma okungenakuhlanjululwa), kanye nezinga lokumelana nomzimba we-hepatic metabolism. I-chlorodehydromethyltestosterone inomthelela oqinile ekulawuleni ngokucophelela kwe-cholesterol ngenxa yobunjalo bayo obungenakunambitheka, ukumelana kwesakhiwo ekuqhekekeni kwesibindi, nomzila wokuphatha. I-anabolic / i-androgenic steroids ingathinta kakhulu ukucindezeleka kwegazi kanye ne-triglycerides, ukunciphisa ukuphumula okuphelile, nokusekela i-ventricular hypertrophy, konke okungandisa ingozi yesifo senhliziyo kanye ne-infarction ye-myocardial.
Ukuze usize ukunciphisa ukucindezeleka kwenhliziyo, kunconywa ukuba ugcine uhlelo olusebenzayo lokuzivocavoca umzimba futhi unciphise ukudla kwamafutha agcwele, i-cholesterol, nama-carbohydrate alula ngaso sonke isikhathi ngesikhathi sokuphathwa kwe-AAS esebenzayo. Ukwengeza ngamafutha wezinhlanzi (ama-4 amagremu ngosuku) kanye nefomula ye-cholesterol / antioxidant efana ne-Lipid Stabil noma umkhiqizo onamazinga afanayo afakwa futhi.
Imiphumela Yecala (Testosterone Ukususwa)
Wonke ama-anabolic / androgenic steroids uma kuthathwa amanani okwanele okukhuthaza ukuzuza kwe-muscle kulindeleke ukuba kugweme ukukhiqizwa kokuhlolwa kwe-testosterone. Ngaphandle kokungenelela kwezinto ze-testosterone-stimulating, amazinga e-testosterone kufanele abuyele evamile ngaphakathi kwezinyanga ezingu-1-4 ze-sedcession secession. Qaphela ukuthi i-hypogonadotrophic hypogonadism eqhubeka isikhathi eside ingaba nokuhlukumezeka kwesibili kuya ekusebenzisweni kabi kwe-steroid, okudinga ukunakekelwa kwezokwelapha.
I-Oral Tbol powder Iziqondiso ezengeziwe
Ngaphandle kokungabaza imiphumela ye-Oral Turinabol izoba yinto ebaluleke kakhulu kumdlali kanye nomgijimi thina empeleni sisho umgijimi. Asikhulumi ngomqambi womzimba noma i-gym rat ehlala njengomunye kodwa kunomuntu ophumelela emncintiswaneni wokuncintisana wekhono lomzimba. Ukusetshenziswa kwe-Oral Turinabol kuzokhuthaza kakhulu ukukhuthazela kwemisipha, ngeke baphele amandla ngokusheshisa futhi izinga labo lokubuyisela kufanele liphuculwe kakhulu.
I-Oral Tbol Marketing powder
Indlela yokuthenga i-Oral turinabol powder (CAS 2446-23-3); Thenga i-Oral Tbol powder evela ku-AASraw
I-AASraw inikeza ubumsulwa i-99% i-turinabol yomlomo ophuzi oluhlaza okwenziwe ngama-bodybuilders noma amalebhu angaphansi komhlaba okusetshenziselwa ngomlomo.
I-turinabol ye-Oral Recipes Powder Recipes:
UKUHLELA KOMHLABA (HLELA NGAPHAMBI KUNYE NOMA)
I-1gram powder (winny, anavar, i-dbol, i-OT, njll.)
I-1ML ukunambitheka kwamanzi
Ama-distilled amanzi ka-43ML
izikhalazo zizobamba nalokhu kuhlushwa:
I-2.5grams powder (winny, anavar, i-dbol, i-OT, njll.)
I-Nandrolone laurate powder